Home » Featured » WAXYAABAHA LAGU HESHIIYAY EE LOOGU TALAGALAY CIYAARAHA NIDA AFKA
- La ballaariyey iskaashiga si loogu daro saldhigyada NAB Show New York -
WASHINGTON, DC - Bandhigga Bandhigga Safarka (TVAs) ayaa mar kale lagu qaban doonaa NAB Show on April 9 ee Las Vegas. Waxaa abuuray Citizine Networks, Inc., abaal-marinnadu waxay sharraxayaan fiidiyowyo safarro oo casri ah oo lagu soo bandhigay 2018 by filimayaasha madaxa banaan, warshadaha safarka, shirkadaha warbaahinta iyo noocyada hab nololeedka.
NAB Show wuxuu soo jiitaa ku dhawaad ​​warbaahinta 100,000, madadaalada iyo tiknoolajiyada tiknoolajiyada aduunka oo dhan mar walbana waxay noqoneysaa mid u adeega barnaamijka abaalmarinta. NAB Show waxaa la qaban doonaa Abriil 6-11 Xarunta Shirarka Las Vegas.
Telefishinadu waxay aqoonsadaan noocyo kala duwan oo shaandhayn iyo muuqaal ah oo fiidiyo ah oo fiidiyooga ah laba qaybood. Mashaariicda iskaa wax-u-qabsada ayaa lagu aqoonsan doonaa gudaha Track Independent. Mashruucyada ka yimaada warshadaha safarka, noocyada hab-nololeedka iyo shirkadaha warbaahinta ayaa lagu aqoonsan doonaa Wareegga Warshadaha. Ku guuleystayaasha ka soo jeeda tartan kasta waxay heli doonaan abaalmarin kala duwan. Intaa waxaa dheer, abaalmarinta abaalmarinta Nomad Award iyo laba abaalmarin oo loo yaqaan 'Audi Award' waxay heli doonaan abaalmarin lacageed.
"Sannadkii tagay ee Safarrada Safarrada Safarka ah waxaa ku jiray ku dhawaad ​​400 ka yimid dalalka 26 ee adduunka oo dhan," ayuu yiri Citizine Founder iyo CEO Philip DeBevoise. "Waxaan rajeyneynaa inaan ka dhigno guusha laga gaaray 2019 NAB Show iyo xiriirinta warbaahinta socdaalka iyo xirfadlayaasha fiidiyowyada shirkadaha soo socda NAB Show New York. "
Muwaadiniinta ayaa soo bandhigi doona Awoodda Fiidiyowga ee $ 1 Trillion Travel Industry on October 17 oo qayb ka ah 2018 NAB Show New York barnaamijka shirarka. Kulanku wuxuu sahmin doonaa saameynta fiidiyoowga kharashka safarka macaamiisha iyo sida filim sameeyaha, bixiyayaasha adeegga warbaahinta, magaca iyo saameyayaasha si fiican u kobciya oo ay udhisaan content. Ka dib fadhiga, Muwaadiniinta ayaa martigelin doona a soo dhaweynta shabakada halkaa oo kaqeybgalayaashu ay fursad u yeelan doonaan inay la kulmaan hanti-dhowraha iyo suuq-geynta suuq-geynta oo ka socda safarada iyo naadiyada raaxada.
Dhammaan soo gudbinta video waa in la duubay ama la sawiray inta u dhexeysa Janaayo 1, 2018 iyo December 31, 2018. Telefishinka TVA ayaa hadda aqbalaya soo gudbinta illaa Janaayo 13, 2019.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan abaalmarinta ayaa la heli karaa halkan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan NAB Show New York waa halkan.
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Idaacadan Convention Broadcasting Convention NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB Show Las Vegas NAB Show Diiwaangelinta NAB16 nabshow National Association of warbaahinta Show Post Production Adduunka sprockit Ultra HD Forum	2018-10-30
Previous: NAB SHAQAALAHA DIB U EEGIDDA SHARCIYADA SHARCIYADA MAGAALADA IYO MACLUUMAADKA TECHNOLOGY CONFERENCE
Next: Helitaanka Natiijooyinka Codsiyada Helen-ka ee Helo Upmix waxay bixisaa Natiijooyin Wanaagsan Dhanka Netflix's, The Haunting of Hill House